Ogaden News Agency (ONA) – Ururka haweenka Ogadeniya- LONDON ayaa shir Muhiim ah isugu yimid.
Ururka haweenka Ogadeniya- LONDON ayaa shir Muhiim ah isugu yimid.
Ururka Haweenka Ogadeniya ee London ayaa isugu yimid shir aad u heersareeya oo lagu dhisayay qorshayaal lagu dar dar galinayo dhaqdhaqaaqa ururka haweeka Ogadeniya ee UK. Shirkan ayaa waxaa kasoo qeyb galay madaxda sare ee JWXO iyo maamulka Jaaliyada Ogadeniya ee London.
Gudomiyaha Jaaliyada London Mudane Cabdicasiis Aadan ayaa shirkan kusoo bandhigay waxqabadka Jaaliyada Ogadeniya ee London isaga oo ku amaanay maamulka ururka haweenka iyo hawlwadeenka ururka haweenka inay laf dhabar u yihiin guulaha iyo horumarka jaaliyada Ogadeniya ee London ay gaadhay. Gudomiyaha ayaa sidoo kale ka waramay kaalinta ururka haweenku ku leeyahay halganka Ogadeniya.
Marwo Rosa Cabdiraxmaan, Gudomiyaha Ururka haweenka London ayaa ka warantay waxqabadka haweenka iyo marxaladihii uu soo maray mudadii la’ aasaasay ururkan oo ah ururkii ugu horeeyay ee haweenka Ogadeniya ka dhisaan wadamada Qurbaha.
Shirkan waxaa sidoo kale ka hadlay xubno muhiim ah oo kamida ururka haweenka Ogadeniya ee London oo halkaas talooyin iyo tusaale usoo jeediyay sidii halgtanka Ogadeniya ee tubta toosan ku taagan loo sii xoojin lahaa. Ururka haweenka ayaa sidoo kale la hadlay madaxda jabhada oo shirkan lagu weydiiyay su’aalo.
Gudomiyaha Arrimaha Dibada HAD mudane Cabdiraxmaan Mahdi ayaa shirkan ururka haweenka uga waramay Marxalada siyaasiga ah ee manta halganka Ogadeniya marayo iyo kaalinta siyaasadeed ee haweenku ku leeyihiin halganka lagu baadi goobayo aayo ka tashiga shacbiga Ogadeniya.
Gudomiyaha Golaha Dhexe Mudane Maxamed Cabdi Yaasiin (diirane) ayaa sidoo kale warbixin ku aadan Gudaha Ogadeniya kasoo jeediyay shirkaas. isaga oo guubaabo xoogan siiyay kuna amaanay waxqabadka iyo kaalinta haweenka Ogadeniya kasoo baxeen.
Xildhibaan Cusmaan Badal iyo Xildhibaan Daahir ayaa sidoo kale shirkaas kasoo jeediyay barnaamijyo wadashaqeyneed oo jaaliyada Ogadeniya ee UK gaar ahaan London laga fulin doono midaas oo ay warbixin guud ka bixiyeen.
Wariyaha jaaliyada London ee